Inhloko ZeNdaba Mpandula 15, 2020
Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye -7,531 asebetholakale beleCovid 19 eZimbabwe. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha-5,690, sebesile kulelo gcikwane, labulala abedlula amakhulu amabili-224.
Uzulu weHarare kanye labenhlanganiso ezisebenzisana lozulu usola ukumiswa umsebenzi kwamaKhansila aleli dolobho, besithi kuzophazamisa ukusebenza kukaManisiphala kanye lokumelwa kukazulu kwezombusazwe ngasikhathi sinye abeZanu Pf sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe iCommission ezaqhuba umsebenzi wekhansili.
Abenhlanganizo yeMISA Zimbabwe batshayela uhulumende weMalawi ihlombe ngomthetho wabo olawula ukutholakala lula kolwazi elizweni oweAccess to Information Act , bekhuthaza amanye amazwe anjengeZimbabwe ukuba alandele isibonelo esihle lesi lawo abe lemithetho engcono eyenza uzulu afinyelele lula ulwazi ayabe eludinga.
Intsha yeZimbabwe yamukela ngenjabulo uhlelo olusanda kusungulwa yikomishini elawula indaba zenkohlakalo eyeZimbabwe Anti- Corruption Commission, olwe Whistle Blower App, okuyindlela uzulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezitshiyeneyo zelizwe.
Uhlangothi olubona ngokuhlelwa kuhle kwemuli olweZim National Family Planning solusungule uhlelo lokunikeza abasakhulayo ulwazi lemfundiso lwendlela zokuvikela ukuzithwala bengakazimiseli.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe “The Connection” sikhangela uhlelo lwekomishini yeZACC olwe Whilstle Blower App, lwendlela uzulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezitshiyeneyo zelizwe..